အစိမ်းရောင် ဇာအပါးလေးနဲ့ အတွင်းသား အလှတွေပေါ် လွင်နေအောင် လှနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း ရဲ့ ပုံရိပ်များ…. – Shwe Naung
အစိမ်းရောင် ဇာအပါးလေးနဲ့ အတွင်းသား အလှတွေပေါ် လွင်နေအောင် လှနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း ရဲ့ ပုံရိပ်များ….
N N | July 6, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ် ပရိသတ်ကြီးရေ….. လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ အလန်းစား ပုံရိပ် လေးတွေနဲ့ လူသိများ လာခဲ့တဲ့ မော်လ်ဒယ် သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ သူမရဲ့ ဖွေးဥနေတဲ့ အသား အရည်လေးနဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ဘော်ဒီ အချိုးအစားလေးဟာလည်း
အပြတ်အသတ် ကိုဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတဲ့အလှ တရားလေးတွေလို့ ဆိုရရင် မှားမယ် မထင်ပါဘူး။ နွယ်နွယ်ထွန်းဟာ photo shooting တွေလည်းရိုက်ကူး ထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ် တွေကတော့ သူမကို ချစ်စနိုးနဲ့ ရစ်ရစ် လို့ခေါ်ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နွယ်နွယ်ထွန်းဟာ အနုပညာ လမ်းကြောင်းပေါ် ကိုရောက်ရှိတာ မကြာသေး‌ ပေမယ့်ပရိသတ် တွေရဲ့အားပေး ချစ်ခင်မှု ကိုရရှိထားတဲ့သူလေးပါ။ သူမဟာချစ်စရာ ကောင်းတဲ့မျက်နှာ လေးကိုပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆွဲဆောင် မှုရှိတဲ့
ခပ်လန်းလန်းပုံတွေကိုsocial networkတွင် မကြာခဏဆိုသလို တင်ပေးတတ်သူ ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိထားတာ ဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။
နွယ်နွယ်ထွန်းဟာ အခု လတ်တလော မှာဆိုရင် လှပတဲ့ ဘော်ဒီလေးရ ရှိဖို့အတွက် gymဆော့နေတာ လည်းဖြစ်ပြီး သူမရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ မကြာသေးမီ ကလည်း နွယ်နွယ်ထွန်းဟာ
သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ “အပေါ်က ကျော်သွားမလား အောက်က ငုံ့သွားမလား ရွေးချယ်ရမှာက မင်း တာဝန်….” ဆိုတဲ့ captionလေး နဲ့ gymက ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ပေး လာပါတယ်။ ကဲ…..ပရိသတ် တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နှင့် ဆက်ဆီကျကျ အမိုက်စား ပိုစ့်တွေပေးနေတဲ့ လုလုအောင်ရဲ့ ပုံလေးများ………